Farewell Le Professionnel: Iconic French nyeredzi Jean-Paul Belmondo anofa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Entertainment » Farewell Le Professionnel: Iconic French nyeredzi Jean-Paul Belmondo anofa
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Entertainment • Fashoni Nhau • France Kuputsa Nhau • Health News • nhau • vanhu • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Mafirimu aBelmondo akaonekwa pamwe chete kanopfuura mazana emamirioni zana nemakumi matatu kumitambo yemitambo.
Jean-Paul Belmondo anofa ave nemakore makumi masere nemasere.
Nhoroondo yeFrance indasitiri yemamuvhi inofa.
Mutambi akange ave nenguva asina kugadzikana mushure mekurwara nesitiroko muna 2001.
Mutambi wechiFinema cinema Jean-Paul Belmondo, uyo akapfura mukurumbira wepasi rose munaJean-Luc Godard's new Wave's new Wave classic "Breathless", afa ave nemakore makumi masere nemasere, gweta rake rakasimbisa.
Jean-Paul Belmondo anofa
Mutambi akange ave nenguva asina kugadzikana achitambura sitiroko muna 2001.
Belmondo - akatumidzwa zita rekuti Bébel nevateereri veFrance - akazove rimwe remabhokisi makuru-eFrance Nyowani nyowani nyeredzi muma60s uye 70s, kumeso kwake kwakaratidzika kwakapesana neakavezwa maficha emuvengi wake uye imwe nguva mushandi Alain Delon.
Akazvarwa muna 1933 mudhorobha rine mari muParis reNeuilly-sur-Seine, mwanakomana we "pied-noir" muvezi Paul Belmondo, Belmondo akapinda mutswanda yezvikoro zvepamusoro zvakazvimiririra asi akaita zvisina kunaka. Akaratidza kufarira mutambo, uye akatanga pfupi bhodhi reamateur basa achiri mudiki. Mushure mekubatwa nechirwere cherurindi, akatanga kufarira kuita, ndokunyorera kune vepamusoro National Academy yeDramatic Arts, pakupedzisira akawana nzvimbo muna 1952.
Mushure mekupedza kudzidza, Belmondo akatanga kuita mumitambo, achioneka mumitambo naAnouilh, Feydeau naGeorge Bernard Shaw. Akachengetedzawo tambo yeadiki mafirimu mabasa.
Kutanga nebasa rake muJean-Luc Godard "Breathless," akazove munhu wepakati weFrance New Wave cinema. Zvichida anonyanya kuzivikanwa nemabasa ake mumitambo yematsotsi uye zvinonakidza, iye zvakare akaisa nyeredzi mumamirodramas naRomy Schneider naAlain Delon. Aitozikamwa kuita madhiri ake.
Hutano hwaBelmondo hwakatora nguva yakaipisisa mugore ra2001 paakarohwa sitiroko akagamuchirwa muchipatara muParis, Furanzi. Akanga akaoma mutezo nesitiroko uye aifanira kushandisa nguva yekudzidzira kufamba uye kutaura.
Akazotora zororo kubva pakuita asi akadzokera kuchiratidziro hombe muna2009 na "Murume uye Imbwa Yake." Yakava yake yekupedzisira firimu uye isina kugamuchirwa nevatsoropodzi. Belmondo akazokumbira ruregerero nezvebasa asi akati zvakamubatsira kukunda kusagadzikana kwesitiroko.
Gweta rake Michel Godest akati mutambi uyu akafira kumba kwake kuParis. “Akanga aneta kwenguva. Akafa chinyararire. ”
FM Whatsapp Apk anoti:
Svondo 19, 2021 pa 13: 17
ndatenda nekugovana nerunyararo ruzivo rwakazara ndapota chengeta.